Izonyuka ngo-R4 imiholo yabasebenzi bohlelo lwe-EPWP – LIVE Express
Imiholo yabasebenzi abasebenza ngaphansi kohlelo lukahulumeni olwaziwa nge-Expanded Public Works Programme (EPWP) izonyuka ngo-R4.41 kusukela ngomhlaka-1 November.
Laba basebenzi okuyimanje bahola iholo eliphansi (minimum wage) elingu-R83.59 ngosuku manje sebezohola u-R88.00 ngosuku noma ngomsebenzi ngamunye abawenzayo.
Lezi zindaba zimenyezelwe iDeputy Director General yakwa-Department of Public Works ebhekelele uhlelo lwe-EPWP, uStanley Henderson.
FUNDA NALOLU DABA: Izinkampani ezingu-50 ezikwi-JSE, okubalwa ne-JSE, aziwulandeli umthetho wezabasebenzi
U-Henderson uthi lokhu kunyuka kwemiholo ngale mali kuzophucula kakhulu izimo zezomnotho zabasebenzi be-EPWP. Uphinde wanxusa izinhlaka ezithintekayo ukuba ziqalise lama holo amasha kusukela ngomhlaka-1 November.
Abasebenzi bohlelo lwe-EPWP benza imisebenzi eyehlukene okubalwa kuyo ukusebenza kuma-Early Childhood Development Centres, ama-Home Community Based Care, i-Extra School Support Programmes, i-Working on fire, i-Working for Water kanye ne-Roads Maintenance Projects.